HomePoliticsFistfight breaks out at Zanu PF meeting
SIMMERING tensions within Zanu PF dramatically boiled over in Manicaland after a provincial executive council meeting in Zimunya degenerated into a fistfight as Zanu PF heavyweights wrestled for control of the province.
There was knife’s edge tension at the meeting last Friday as provincial executive members accused each other of working with politburo and central committee members to cause divisions in the party ahead of make-or-break elections scheduled for 2013.
Sources who attended the meeting told the Zimbabwe Independent Zanu PF provincial chairperson for Manicaland, Mike Madiro, was not spared during the fracas as he was manhandled by provincial secretary for production and labour, John Chirimambowa, who was infuriated by allegations he was working with the party’s senior leadership to cause confusion and ructions in the province.
The commotion started when provincial secretary for information and publicity Godfrey Chikwanda stood up to accuse national secretary for administration, Didymus Mutasa, politburo member Munacho Mutezo, and central committee members Enock Porusingazi and Freddy Kanzama of fuelling divisions in the province.
The sources said Chikwanda accused the quartet of working with provincial executives to destabilise provincial organs of the party. He reportedly accused the senior officials of being behind recent machinations leading to the ouster of provincial youth chairperson, Tawanda Mukodza, at a meeting held a week after the Zanu PF annual conference in Gweru.
Mukodza was accused of diverting money sourced by the youth league for the party from companies mining diamonds in Marange for personal use.
He is alleged to have set up a timber company and bought several cars and a house using the funds.
Mukodza has since been replaced by lawyer, Kelvin Manyengavana.
“While Chikwanda was still speaking, Chirimambowa stood up and attacked him as well as Madiro,” said a provincial member who attended the meeting.
“Chirimambowa attacked Chikwanda for making the allegations and Madiro for allowing him to spread what he said were lies.”
Previous articleZec cannot deliver free and fair elections: ZDI
Next articleEx-Zipra fighters rebuff Chiwenga